Torohevitra 8 hanarenana ara-dalàna ny lozam-pifamoivoizana
Efa sendra lozam-pifamoivoizana ve ianao? Raha manana ianao dia ho fantatrao fa sady mampihetsi-po no mampiady saina. Ny lozam-pifamoivoizana dia mety mamela ny fiaranao miaraka amin'ny fitaratra vaky, jiro vaky, sisin'ny korontana, sns. Mbola ratsy kokoa noho izany aza ny fahatsapana andraikitra fa avy amin'ny famoahana ratra na fahasimban'ny fiaran'ny hafa na ny vatany. Fa ahoana no hiarovanao ara-dalàna amin'ny lozam-pifamoivoizana? Nahazo torohevitra vitsivitsy izahay izay hanampy anao amin'ny raharaha!
Ny fotoana mahazatra indrindra olona maratra indrindra dia mandritra ny fianjerana fiara. Na ny lozam-pifamoivoizana kely aza dia mety hiteraka olana lehibe, eny na dia ny kilemaina maharitra amin'ny olona sasany aza. Ny fidirana amina lozam-pifamoivoizana dia mety ho traikefa mampivadi-po tokoa. Ny olona dia manana olana amin'ny fahasimban'ny fananana miaraka amin'ny fahavoazana. Indraindray ny olona iray izay manana olana amin'ny fahaketrahana ara-tsaina dia mety haterak'ireo karazana fihaonana ireo.
Fiaran'ny fiara voadona UAE
Ny fifandonana amin'ny fiara mpitondra môtô no loharano maty sy ratra ho an'ny olona eo anelanelan'ny 18 sy 24 taona, araka ny tatitra tamin'ny fanadihadiana tamin'ny 2019 UAE. Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana ao Dubai dia ny ankamaroan'ny mpamily efa ho 17% no mandà fehin-kibo satria mikitroka ny akanjony izy ireo. Mandeha haingana sy mihazakazaka ny ratra, anisan'izany ny tara ary tsy fananana fiheverana miahy.
Ny fomba tsara indrindra hanarenana amin'ny lozam-pifamoivoizana
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahazo izay rehetra ananany rehefa mametraka fitakiana. Ny antony dia satria tsy azon'izy ireo ny zon'ny be ananany. Ireo orinasam-piantohana dia manandrana mandositra hatrany amin'ny fandoavana vola kely arak'izay azonao atao. ny manakarama mpisolovava ratra manokana, ianao dia hanampy be dia be amin'ny toe-javatra tsy ahafahanao mahazo izay manjo anao manokana.
Raha mifanipaka ianao, ny mpisolovava dia afaka manampy anao betsaka amin'ny fampiasana ny scenario. Izy ireo dia afaka manampy anao amin'ny fanadinadinana vavolombelona, ​​manangona porofo ary manome antoka fa mahazo fitsaboana sahaza ianao. Io irery dia hamela anao ho sitrana amin'ny fiheverana mety avy amin'ny mpitsabo matihanina sy haingana. Ny fanarahana ny lalàna dia ahafahanao manohy ny raharaham-pitsaranao, manome antoka fa manana vola sahaza ianao handoavana ny filanao ara-pahasalamana ary hanonitra anao araka ny tokony ho izy ny karamanao very noho ny fahavoazanao.
Indraindray ny lozam-pifamoivoizana dia tsy ampoizina. Lozam-pifamoivoizana matetika dia hiteraka fahavoazana ara-tsaina, izay mety manimba toy ny fahavoazana ara-batana. Ny fahazoana ny totalin'ny fitakianao dia ahafahan'ny olona iray mahazo fanampiana amin'ny matihanina amin'ny fahasalamana ara-tsaina.
Zavatra tokony hataonao aorian'ny fianjeran'ny fiara
Ary midika izany fa niaina fianjerana fiara ianao. Mihazakazaka ny lohanao, ary nivoaka tsy ho aiza intsony izy io, ary tsy azonao antoka izay hatao. Mitranga ireo zavatra ireo, ary tsy andrasan'olon-kafa izy ireo, fa mijanona ho tony ary mandray ny dingana tsirairay isaky ny mandeha. Hilamina ny zava-drehetra raha manaraka fepetra mora ianao.
Akory sy ny tery ny fidirana mivantana amin'ny fianjerana fiara dia mety hahatsapa ho mihoatra ny hainao fa tsy izany. Ataovy mifantoka sy milamina ary aza miala eo amin'ilay toerana nianjeran'ny fiara. Ny fanamelohana anao noho ny fikapohana sy ny fihazakazahana dia ratsy lavitra kokoa ary mety hahatonga anao any am-ponja miaraka amin'ny fijaliana noho ny fiampangana anao ho nahatonga ny lozam-pifamoivoizana.
Tsy maintsy adinoo amin'ny mombamomba ny olona rehetra voakasik'izany. Raiso ny toro-fiantohany, ny adiresy mpamily, ny telefaona ary ny nomeraony. Makà lisitry ny vavolombelona, ​​izay nahita ny fiara nianjera tamin'ny fomba rehetra.
Ataovy azo antoka mitsabo tena rehefa naratra. Ny soritr'aretina dia mety hiseho ora na andro aorian'izany, na dia tokony tsy hino ianao fa naratra avy hatrany taorian'ny fianjeran'ny fiara. Tsara kokoa ny mahita mpitsabo avy hatrany mba hahafahana manamarina anao. Tsy misy soritr'aretina mety omen'ny ratra anatiny sasany fa mety mahafaty andro na ora maro.
Fanairana ny manampahefana, satria ny lozam-pifamoivoizana ankehitriny dia olana goavana mety hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fiainanao. Fahendrena ny fanaovana ny fianjeran'ilay fiara ho raharaham-panjakana izay misy ofisialin'ny tatitra ataon'ny polisy. Ny fampiharana ny lalàna an-tariby mba hahatratrarana ny lozam-pifamoivoizana. Raha eo amin'ny toeranao dia mihetsika ny manampahefana manoloana ny ratra izay maniry fiara mpamonjy voina, mitsidika ny tobin'ny polisy manodidina anao ary manaova tatitra. Hamarino tsara fa manoratra ny habetsaky ny tatitry ny polisy ianao.
Olona maro be mitondra fakantsary azo ampiasaina ao anatin'ny efitranon'ny fonon-tànan'izy ireo noho izany. Alefaso ny sary misy ny fahasimbana rehetra natao sy ny fiara tafiditra ao. Alefaso koa ny sary misy ratra, toy ny mangana sy ratra. Amin'ny farany, ny fitazonana ny faran'ny fiara hiantohana ireo maso fiantohana dia afaka manara-maso azy alohan'ny hametrahana azy. Raha ny sarinao no anananao rehetra, dia tsara lavitra noho ny tsy misy izany.
Rehefa sendra fianjerana fiara ianao mampandre ny mpiantoka anao. Ny fiantohana dia manarona ny faktiora ara-pitsaboana sy ny fahasimbana sasany eo ambanin'ny politikanao. Fahendrena ny mitady aloha alohan'ny manaraka.
Tsara homarihina, tsy miteny na inona na inona ianao eo amin'ny sehatra. Aza manao fanambarana - aza miresaka momba ny fianjeran'ny fiara, indrindra aza mandray ny tsiny na dia mino ianao fa ianao no diso. Ny kely lazainao dia ny zavatra voajanahary kokoa hatao aorian'izany. Ary aza miresaka amin'ny orinasa fiantohana hafa mihitsy. Ny fanambarana nomenao dia mety hampiasaina hanohitra anao.
Haingana! Ny statut of limitation amin'ny fanjakanao dia mety hametra ny refy azonao. Ny tsara indrindra dia ny fanaraha-maso ireo fitakiana ataonao sy ny fanamboarana anao — diniho amin'ny lehilahy afaka manampy azy io.
Dubai: Raha kely indrindra dia 224 ny olona nandeha an-tsokosoko, anisan'izany ny fitaterana entana, kely kokoa noho ny kamiao tsy dia mazàna ary eny an-dalambe UAE ao anatin'ireo 15 taona lasa teo, dia misy sidina 14 isan-taona.
Ny ankamaroan'ny ratra dia mety ho voasakana avokoa, raha nahita ny fitsipiky ny fifamoivoizana ny mpitondra fiara.
Voaroaka ny aotobisy iray, toy ny volontany am-bifotsy rehefa nisy kamio nitondra rock sy fasika tampoka ary nifandona taminy. Ny ankamaroan'ireo mpiasa 24 maty no maty vokatr'izany.
Kamiao iray no nifatratra tao anaty fitaterana, ka nanilika azy metatra vitsy monja.
Ireo firaketana dia manambara fa ny fanodinana haingana, ny fanafainganana ary ny fitaterana ny fomba iray hahatratrarana ny fomba iray nolavina ho an'ny mpandeha. Mampalahelo fa ny mitondra fiara mampidi-doza any anaty fiara mavesatra dia lasa toerana manara-dalàna ary firy ny fiainganana ihany no miangona hatrany.
Indro misy fijery lozam-pifamoivoizana nahafaty eny amin'ny lalana UAE:
Fotoana ankehitriny 2021: Dubai dia nandrakitra lozam-pifamoivoizana mihoatra ny 500 tao anatin'ny 6 ora noho ny toetr'andro. Ny toetr'andro dia niteraka lozam-pifamoivoizana an-dalamby izay nahitana fiara 28 sy ratra 9.
2014: Ny faharatran'ny bus iray nivadika taorian'ny lozam-pifamoivoizana tany Dubai tamin'ny 10 Mey. Ny fiara fitateram-bahoaka 29 no nifandona tamin'ny kamiao.
Ny faharatran'ny fiara fitaterana taorian'ny fifandonana tany Dubai
2010: Olona dimy no maty rehefa nihazakazaka niditra tao anaty kamiao iray ny SUV napetrany teo afovoan-dàlana satria lany ny solika.
Antony 5 lehibe mahatonga ny motera fifandonana fiara tany UAE nandritra ny 18-24 taona.
Ny fanadihadiana dia nalaina tamin'ny mpamaly 1007 avy amin'ny RoadSafety UAE.
Ny talen'ny fitantanana RoadSafety, Thomas Edelmann, dia nilaza tamin'ny teny nindramina hoe:
“Raha tsorina, ny mpamily tanora dia mitondra tena mampidi-doza ary miaro tena tsy dia kely noho ny mpamily efa antitra sy efa za-draharaha. Ny mpamily tanora dia somary variana kokoa, manaratsy kokoa, mampiasa ny mpampangalatra azy sy ny fehikibony, kely noho ny mpamily antonony. ”
Tsy mampiasa tondro (67 isan-jato)
Mandeha haingana ho an'ny Tara tara (67 isan-jato)
Aza mampiasa fehikibo (72 isan-jato)
Familiana variana (66 isan-jato)
Tailgaiting (59 isan-jato)
“Ny tena mampatahotra dia ny isan-jaton'ny mpamily tanora maratra, na eo aza ny fe-potoana fohy aorian'izy ireo.”
Tsy maintsy misy fiovana ara-kolontsaina amin'ireo fomba fiasa izay mitondra fiara mba hahazoana antoka fa mifampijery eny an-dalana ny mpamily ary handray ny andraikiny. Mampatahotra ny mahita ny fahatakarana ny hevitry ny mponin'i UAE fa misy mpitondra fiara mampidi-doza kokoa noho ny dimy taona lasa, ”hoy i Thomas Edelmann.
Ny lozam-pifamoivoizana dia fotoana tena sarotra amin'ny olon-tianao sy aminao manokana rehefa sendra lozam-pifamoivoizana ianao. Ny lozam-piarakodia dia tsy vitan'ny fanindronana ara-batana fotsiny, fa mety ho lanja ara-dalàna sy ara-bola ihany koa. Mitadiava fanampiana fanampiny avy amin'ny loharanom-baovao azo antoka.
Mifandraisa aminay miaraka amin'ny antsipiriany momba ny ratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana; NY mpisolovava ratra manombatombana sy hametraka ny fangatahana ambony indrindra, hifandraisa aminay panjakana Dubai.
Karazana tranga 5 momba ny heloka bevava any Dubai sy ny fomba hanampian'ny mpisolovava anao
Lalàna misotro sy mitondra fiara any Dubai na UAE: Tsy maintsy manaraka ny lalàna ny mpamily mba hisorohana ny sazy henjana
Suliman on Inona no mitranga raha tsy mandoa trosa na carte de crédit ianao any UAE?
Boy on Inona no mitranga raha tsy mandoa trosa na carte de crédit ianao any UAE?